U beddel Raspberry Pi-kaaga barta marin-u-helka wireless | Laga soo bilaabo Linux
En maqaal hore ayaa ka hadlaya DietPi nidaam loogu talagalay Raspberry Pi in marka lagu daro helitaanka beel ballaadhan ay leedahay nidaamyo iyo mashaariic kala duwan.
Kuwaas oo aad u rogi kartid Raspberry Pi-gaaga xarun-warbaahin fara badan, qalabka ciyaarta ee 'retro game console', a NAS server iyo waxyaabo kale.
1 U rogaya Raspberry Pi barta marinka wireless
1.2 Isku habee serverka DHCP (dnsmasq)
1.3 Habee gudbinta taraafikada
1.4 Daar isku xirka internetka
U rogaya Raspberry Pi barta marinka wireless
Si tan loo gaaro, Waa lagama maarmaan in lagu helo nidaam qalliin Raspberry-keena, markaa nidaamka rasmiga ah ayaa ugu habboon.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan cusbooneysiino nidaamkayaga, tanina waxay ku taal terminal waxaan ku qori doonnaa amarrada soo socda:
Marka tan la dhammeeyo, waxaan dib u bilaabaynaa qalabkeenna, si wixii isbeddel ah ee la sameeyo ay u badbaadaan.
Ku noqo nidaamka, aan sii wadno rakibidda hostapd, dnsmasq iyo buundooyinka, Kuwani waa labada barnaamij ee aan u adeegsan doonno inaan u beddelno Raspberry Pi-gaaga barta marin-u-helidda wireless-ka.
Sidaa darteed, si loo rakibo, kaliya la furo terminaalka dhexdiisa waxaan ku qoreynaa amarrada soo socda.
Marka rakibidda kuwan la dhammeeyo, waxaan dooneynaa inaan tafatirno feylasha qaabeynta ee barnaamijyada markaa waa inaan joojino adeegyadooda:
Hadda waxaan sii wadaynaa inaan wax ka bedelno feylka soo socda:
Hadda waxay ku jirtaa faylka, ku dar khadadka soo socda dhamaadka:
Halkan kan aan dhigeyno, waxaan u maleyneynaa inaan haysanno cinwaanno IP ah oo maxalli ahIntaa waxaa dheer, isku xirnaanta shabakadeena waxay leedahay magacyo caadi ah mana jiraan kuwo kale.
Intaa kadib, taabo Ctrl + O, ka dibna Ctrl + X si aad u kaydiso faylka una baxdo tifaftiraha.
Isku habee serverka DHCP (dnsmasq)
Waxaan u adeegsanaynaa dnsmasq adeegeena DHCP. Fikradda adeegaha DHCP waa in si firfircoon loogu qaybiyo xuduudaha isku xirnaanta shabakadda, sida cinwaanada IP-ga, isdhaafsiga iyo adeegyada.
Aynu dib u magacawno faylka qaabeynta qaabeynta oo aan qorno mid cusub:
Faylka cusub waxaan ku qoreynaa khadadka qaabeynta:
Khadadka aan ku darno waxay ka dhigan yihiin inaan bixin doonno cinwaanno IP ah oo u dhexeeya 192.168.0.11 iyo 192.168.0.30 loogu talagalay interface wlan0. Waan xireynaa oo waan keydinaynaa faylka.
Y hadda waxaan abuureynaa feyl cusub oo qaabeyn ah, waxaan tan ku sameeynaa adoo garaacaya amarka soo socda:
Gudaha gudaheeda waxaan dhigeynaa waxyaabaha soo socda:
Halka ay kaliya wax ka beddeli doonaan labada sadar ee ugu dambeeya, maxaa yeelay halkan waxay ku qori doonaan magaca ay u bixin doonaan barta ay ku galaan iyo sidoo kale lambarkooda sirta ah, iyaga oo aan lahayn "".
Markaan tafatirno waan keydin doonnaa oo waan xiri doonnaa isbeddelada. Iyo hada aan fureyno feylka soo socda:
Faylkaan, raadi xariiqda oranaya # DAEMON_CONF = ”” - ka saar ta # oo dhig wadiiqada feylasha qaabkeena ee xigashooyinka, marka waxay u egtahay sidan:
Habee gudbinta taraafikada
Fikradda halkan ku jirta ayaa ah in markay isku xidhaan, taraafikada loo gudbin doono xadhiggooda Ethernet. Sidaa darteed, waa inaan WLAN ugu dirnaa khadka Ethernet-ka modem-kaaga. Tani waxay ku lug leedahay tafatirka feyl kale oo qaabeynta ah:
Hadda raadi khadkaan:
Oo meesha ka saar "#", keydi oo u dhow faylkaaga.
Tallaabada xigta waa in lagu daro sharci cusub oo iptables ah, ka dibna leh:
Daar isku xirka internetka
Hadda Raspberry Pi wuxuu u shaqeynayaa sidii barta marin u helitaanka ee aaladaha kale ay ku xirmi karaan. Si kastaba ha noqotee, aaladahaas wali ma isticmaali karaan Pi si ay u galaan internetka. Si tan loo suurtageliyo, waxaan u baahannahay inaan dhisno buundo ka gudubta dhammaan taraafikada u dhexeysa wlan0 iyo eth0 isdhexgalka.
Waxaan diyaar u nahay inaan ku darno buundo cusub (oo la yiraahdo br0):
Marka xigta, waxaan ku xiri doonnaa iskudhafka eth0 iyo buundadayada:
Ugu dambeyntiina, aan wax ka bedelno faylka isdhexgalka oo aan ku darno khadadka soo socda dhamaadka feylka:
Waxaan dib u bilawnay Raspberry Pi waana taas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Raspberry Pi-gaaga u rogo barta marin-ka-wareejinta
Fiid wanaagsan iyo mahadsanid macluumaadka.
Waxaan awooday inaan gaadho barta "Configure traffic forwarding" labadii amar ee ugu horeeyay si fiican ayaa loo fuliyay laakiin kan saddexaad "iptables-restore </etc/iptables.ipv4.nat" ma samayn.
Tan ka dib waxaan isku dayay inaan sii wado iyo barta "Enable the Internet connection" markaan fuliyo amarka "sudo brctl addif br0 eth0" Waxaa iga dhamaaday shabakad ku taal xaafada raska, fiilada ama wifi
Waxaan ku sii waday inta kale ee qaabeynta gudaha, laakiin dib u bilaabista kadib wali ma haysto shabakad.
Ma la hagaajin karaa ama la rogi karaa?
Salaan iyo mahadsanidiin si aad uhoreysa.
DietPi, waa bedel aad ufiican oo loo yaqaan 'Raspbian Lite' ee loo yaqaan 'Raspberry Pi'